Xinxiang Yuanhang Ukufundisa Izinsiza kusebenza Co., Ltd igxile lomkhiqizo, ngokuqinile silawula izindleko zokukhiqiza, futhi kwenza amakhasimende wanelisekile. Inhloso yethu sigcine Ukubambisana eduze namakhasimende ngokuhamba kwesikhathi. Ukunamathela "humanized ukuphathwa ubuqotho umoya, ukuphishekela ubuhle", "do Anginayo abantu, ngiye onesiphiwo, abantu onamakhono mina ukushintsha", ukunikeza the best service izinga amakhasimende! Sibheke phambili kumazwana wabo ezibalulekile kanye neziphakamiso ezivela njalo umngane, isandla amakhasimende amasha namadala bese udala kangcono kusasa! Thatha oda ekhaya aphesheya, ukwamukela imidwebo ngokwezifiso kanye amasampula! Siyakwamukela ukubuza ukuxoxisana!
Yuanhang Ukufundisa Izinsiza kusebenza uye zanqwabelana isipiliyoni ocebile emkhakheni slicing yemvelo kanye nakwezinye izindlela zokuphakelwa laboratory kanye ukukhiqizwa imishini kanye yokuthengisa, futhi amandla eqinile lobuchwepheshe kanye namandla amakhono zokuthuthukisa umkhiqizo. Kuyinkolelo eyamukelwa abaningi isicelo ekufundiseni zokuhlola Institutions zemfundo ephakeme kanye nezikole zamabanga aphansi naphezulu ekhaya aphesheya, efana nezolimo, ezamahlathi, nemfuyo, imithi, izikole ezivamile, izikhungo ukucwaninga kwesayensi, njll, okubandakanya emikhakheni ehlukahlukene imfundo.
Umkhiqizo: zezinhlobo ngesibonakhulu, izilwane nezitshalo zezinhlobo, izilwane nezitshalo zezinhlobo, impahla esishunyekiwe zezinhlobo organic (crystal zezinhlobo), (yezokwelapha zokuhlola imodeli yokufundisa, ukufundisa imodeli) imodeli, zokugula kwabantu, Histology futhi Embryology, parasitology, imithi, i-microbiology, uphawu isitshalo zokugula, ngokuphila kwezilwane kanye wezitshalo ekilasini microscope slide, ndlovu yokwakheka, zezinhlobo yokwakheka, plastication amasampula iphutha ngalinye, imodeli anatomy, semithambo yabalingisi zezinhlobo kanye neminye imikhiqizo.
Engineering: ukwakhiwa kwamakhemikhali physics laboratory, ukwakhiwa campus okusakaza, kanye nokwakhiwa emakilasini multimedia.
I-herbarium kuhlanganisa: ndlovu iqoqo ihholo, okwelapha ndlovu iqoqo ihholo, leaf ndlovu iqoqo ihholo, biorecorve Museum, isilwane ndlovu Museum, herbarium, izilwane nezitshalo ndlovu iqoqo ihholo, eyenziwe emvelweni ndlovu Museum, ipaki emvelweni, ingadi biologic, herbarium, igumbi zomlando, Igumbi womhlaba, njll
Usizo lwabenza imisenenzi ukukhiqizwa: zezinhlobo, zezinhlobo sokugembula, zezinhlobo sokugembula, izigaba histological, plasticizing zezinhlobo, bio chips, ithambo zezinhlobo, slice izimuncagazi, slice microbial, tincetu imithi Chinese, isitshalo tincetu, isibonakhulu amaslayidi, izigaba ezincane, zezinhlobo sokugembula kanye sokugembula, zezinhlobo, zezinhlobo begazi, isitshalo zokugula kwesigaba, isitshalo zokugula, zokugula isilwane, abantu zokugula biopsy, begazi microscope slide, esigabeni isilwane, Histology isilwane, amagciwane umthwalo, umthwalo microbial, smear microbial, isiShayina kwesigaba imithi yokufundisa, esigabeni yezokwelapha, efundisa izigaba, zezinhlobo cwe, zezinhlobo, zezinhlobo, waphonsa zezinhlobo, laminating isitshalo zezinhlobo, zezinhlobo bula, zezinhlobo yokwakheka, zezinhlobo sectional, zezinhlobo isinambuzane, isilwane zezinhlobo, zezinhlobo nemijovo, izimvemvane, zezinhlobo omisiwe, umbungu, isifanekiso, isifanekiso, biology kwesigaba, Histology futhi Embryology usike Slice, Botanical sigaba, umlando wokuphila ndlovu, esigabeni Botanical, yezokwelapha parasitology, isigaba microbiological, ndlovu begazi, ndlovu amagciwane, isibonakhulu begazi, isibonakhulu, izibuko yezinkanyezi, izibuko, isifanekiso amabhodlela, Petri izitsha, beaker, futhi amakhemikhali ingilazi.